#Bayle :"Dadka Soomaaliyeed waxaay u ooman yihiin nabad iyo dib u heshiisiin waarta" » Axadle | Get Latest News From Horn of Africa
#Bayle :”Dadka Soomaaliyeed waxaay u ooman yihiin nabad iyo dib u heshiisiin waarta”
MUQDISHO, Soomaaliya – Talaabo dhif iyo naadir ah, wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa iyadda oo is-fahamwaa uu taagan yahay waxay la kulmeen madaxweynaha Somali-land, Muuse Biixi Cabdi.
“Dadka Soomaaliyeed waxaay u ooman yihiin nabad iyo dib u heshiisiin waarta,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka Maaliyadda oo qayb ka ahaa is-gacan-qaadka ka dhacay Xajka.
“Tani (kulanka) waa fariin ka timid dhamaan Xujeyda ku sugan Xaramka, iyadda oo aysan jirin wax reeban. Goorta waa waqti xaadirkan,” ayuu ku daray hadalkiisa isaga oo xusaya sida loogu baahan yahay wada hadal.
“Gebi ahaanteena waa in aan u guntanaa sidii aan raadin lahayn dib u heshiisiin kama dambeys ah oo macno leh misana dhab ah,” ayuu hoosta ka xariiqay.
“Tani waa fariin ka timid Xaramka,” ayuu hadalkiisa kusoo gunaanuday, Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, oo u muuqda mid soo jeedinaya in la karaar-siiyo wada hadaladda labada dhinac ee hakadka ku jira.